Coffee Lover တွေဆိုရင်တော့ Caffa Myanmar ကိုလှမ်းခဲ့ပါ….. – FoodiesNavi
Coffee Lover တွေဆိုရင်တော့ Caffa Myanmar ကိုလှမ်းခဲ့ပါ…..
Caffa Myanmar Cafe’ Shop လေးနဲ့မိတ်ဆက်မပေးခင် Coffee Lover တွေကိုဝေမျှပေးချင်တာလေးရှိပါတယ်။ ဒါကတော့လူတစ်ယောက်သောက်သုံးတဲ့ကော်ဖီပေါ်မူတည်ပြီးအဲ့လူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုသိနိုင်တဲ့ဆိုတာလေးပါ။
Black Coffee =>Black Coffee ကြိုက်တဲ့သူတွေကစည်းကမ်းကြီးတယ်၊တော်တယ်၊ သည်းခံနိုင်စွမ်းရှိတယ်၊ အပြောင်းအလဲမကြိုက်ဘူးစိတ်ကြီးတယ်….
Latte Coffee => Latte Coffee ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေကအေးအေးဆေးဆေးနေတတ်သူတွေဖြစ်ပြီး ကူညီလိုသောစိတ်ရှိသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးကိုချစ်တတ်ပြီးစိတ်ရှည်တဲ့သူတွေပါ…
3-in-1 Coffee =>3-in-1 Coffee ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေက ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနေတတ်သူတွေပါ..
Coffee Lover တွေရောဘယ် Coffee အမျိုးအစားကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Coffee လေးနဲ့ကိုယ့်စိတ်နဲ့ရောကိုက်ညီမှုရှိပါသလား??? မှန်လား?မှားလား? ဆိုတာ Coffee Lover တွေအသိဆုံးဖြစ်မှာပေါ့နော်။
အခုမိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဆိုင်လေးကတော့ Caffa Myanmar ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆိုင်လေးက No.(504/506) Merchant Road Kyauktada Township မှာဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ဖွင်ချိန်ကတော့-8:00 am to 7:00 pm ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆိုင်လေးရဲ့အပြင်အဆင်လေးကအရမ်းကိုမိုက်ပြီး ဝန်ထမ်းတွေကလည်းအရမ်းကိုဖော်ရွေပါတယ်။ သူ့မှာရရှိနိုင်တဲ့ Coffee အရသာရော၊ Coffee ရနံ့လေးကပါ Coffee Lover တွေကိုတကယ့်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။
သောက်သုံးပြီးတဲ့အချိန်ထိ Coffee ရနံ့လေးစွဲကျန်ခဲ့ပြီး စိတ်ကိုပေါ့ပါးလန်းဆန်းစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဒီဆိုင်လေးမှာ Coffee သောက်သုံးရုံပဲမဟုတ်ပါဘူး Coffee Shop ဖွင့်ထားတဲ့သူတွေရော၊ Coffee Course တက်ချင်တဲ့သူတွေရော၊ အိမ်သုံး၊ရုံးသုံး၊ဆိုင်သုံးဖို့ Coffee equipment တွေဝယ်ချင်တဲ့သူတွေရောအားလုံးအတွက်အဆင်ပြေစေမယ့်နေရာလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Coffee အပြင် Coffee ဆိုင်ဖွင့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အခုလို One Stop Serivice ကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ဆိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
CAFFA is one stop service for open coffee shop
Barista Training course တွေအားလုံးရရှိနိုင်တဲ့နေရာလေးပါ။ “All of these is special price for you” ဆိုသလိုမျိုးပဲ customer များအားလုံးကိုစိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်ပေးစွမ်းပါတယ်။ ပုံလေးတွေကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆိုင်လေးရဲ့အပြင်အဆင်၊ Coffee Decoration ပုံလေးတွေက Coffee Lover တွေကိုစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေမှာတော့အမှန်ပဲနော်။ Coffee Lover တွေစိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းချင်ရင်တော့ Caffa Myanmar မှာကော်ဖီသောက်ရင်း စိတ်ပင်ပန်းစရာတွေကိုမေ့ပျောက်လိုက်ကြရအောင်…
Ph-0943063779 ,Viber 0943063779
Caffa Myanmar Websit Link : www.caffacoffeemaker.com
Caffa Myanmar Facebook Page : www.facebook.com/caffacoffeemakerMyanmar
In Restaurant Guides Tagged Barista Training course, Coffee equipment, Coffee ingredients, Coffee machines Leaveacomment